Xiriirka Kubadda Koleyga oo Iclaamiyay Xilliga Doorashada
MUQDISHO – Qado sharaf uu soo agaasimay Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga ayaa lagu Islaamiyay xillliga doorashada iyo musharaxnimada Guddoonka oo uu mar kale xilkaasi isku soo taagay Guddoomiyaha haatan xilka haya Md. Ibraahim Xuseen Cali (Roombo).
Khudbad aad qiimo u badan oo koobaysa guud ahaan waxqabadkii muddada afarta sano ee XSKK ayaa waxaa halkaasi ka jeediyay Guddoomiye Roombo oo tibaaxay in Xiriirka Kubadda Koleyga uu ku talaabsaday horumar dhinacyo badan oo isugu jira Qabashada Tartamada Kubadda Koleyga iyadoo dalka uu ku jiray marxalad adag, ka qeybgalka Tartamada heerka Caalami iyo Guulihii Taariikhiga ee laga soo hoyay. Isku Xirka Xiriirka Caalamiga iyo kan bahda Kubadda Koleyga ee ku nool daafaha dunida.
“Ma`aha wax qarsoomi karo Talaabooyinkii dhinaca horumarinta Kubadda Koleyga iyo Guulihii lagu talaabsaday, wax badan waan qabanay waxyaabo kale oo inoo suragelinna waan jeclahay inaan horumar ka sameyno taas waxaa ii saamixi kara idinkoo codkiina mar kale i siiya.” Ayuu yiri Guddoomiye Roombo oo muujinaya inuu yahay musharax Guddoonka sare ee Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga.
Dhinaca kale Guddoomiyaha XSKK ayaa shaaciyay waqtiga doorashada oo uu sheegay inay dhici doonto 20ka May, isagoo intaasi ku daray inay sidaasi isla garteen GOS, Wasaaradda Isboortiga iyo Xiriirka Kubadda Koleyga.
Si kastaba, Kulankan Qado Saharafta ayaa waxaa ka soo qeybgalay Guddiga Fulinta XSKK, Madaxda Kooxaha K/Koleyga, Guddiga Olamabikada Gobolka Banaadir, Bahda Qurba-joogta Isboortiga iyo Saxaafadda waxayna ku dhamaatay jawi loo riyaaqay.